Ikhosi yasimahla yeAutoCAD-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/course AutoCAD Free
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GISyokuzonwabisa
Ukufunda i-AutoCAD akusengxengxezo kula maxesha onxibelelwano. Ngoku kunokwenzeka ukufumana iincwadana ezinemifanekiso ngevidiyo simahla kwi-intanethi. Olu khetho endikubonisayo ukuba mhlawumbi lona luhlobo olungcono lokufunda i-AutoCAD ngendlela elula.
Ngumsebenzi kaLuis Manuel González Nava, uguqulelo olwalukho kwiphepha elinamaphepha angama-565 kunye neeDVD ezimbini kwaye ngoku ziyafumaneka kwiqonga leAulaClic. Indlela yokusebenza ibandakanya amacandelo achazayo, iikhonsepthi kunye nemifanekiso ehambelana nokufunda kunye nezifundo zevidiyo ezilayishwe kuYouTube ezinesandi kunye neenkcazo ezingaphaya kokulindeleyo. Nangona isekwe kujongano ngaphambi kwe-AutoCAD 2009, yintoni ebalulekileyo ekwindlela, kuba imiyalelo iyafana.
Ngoku isimahla, ukuba ijongiwe kwi-Intanethi kwiAulaClic. Kuyacetyiswa ukuba ubukele iividiyo, nganye nganye, ngaphandle kokuphelelwa lithemba de ube uqonde ubungakanani obupheleleyo benkqubo yenkqubo, emva koko unokungena kumxholo obhaliweyo. Isinyathelo esilandelayo kukuzama ukwenza umsebenzi ofanayo kwividiyo, uyeke xa kukho imfuneko, kwaye kuloo mandla, ngokuqinisekileyo kwiintsuku ezine umntu ozinikeleyo angafunda le nkqubo ngokwakhe ngokungathi ibikhona (okanye ibhetele) kunokuba ikhosi yeeyure ezingama-60.
Ukwahlula ngokubanzi komxholo uhlukaniswe kwii-41 ziqendu ezingabonwa kwi Inkcazo ephezulu. Kukho isalathiso sevidiyo ezifundiswayo kunye nenani elifanayo. Le ngxelo yevidiyo.
1 Yintoni i-AutoCAD?
2 Umboniso wesikrini (1 | 2)
3 Units kunye nokudibanisa (1 | 2)
4 Iiparameters eziphambili
5 IJometri yezinto ezisisiseko
6 IJometri yezinto ezihlanganisiweyo
7 Iipropati zezinto
8 Umbhalo (1 | 2)
9 Ukubhekisela kwizinto
10 Inkqubo yokulandelela inkcazelo
11 Ukulandelela kweepolisi
13 Jonga ulawulo
14 Inkqubo yoququzelelo lomntu
15 I-edition elula (1a | 1b | 2 | 3a | 3b)
16 Ulungiso oluphambili (1 | 2)
18 Iipateni ze Shading (1 | 2)
19 Iifestile window
20 Izithuba (1 | 2 | 3)
21 AutoCAD ivimba
22 Ngxelo zangaphandle
23 Iziko leMfuno
25 Ukuphakanyiswa (1 | 2)
26 Imigangatho yeCAD
27 Isakhiwo sokuprinta (1 | 2)
28 Ukushicilelwa kokuprinta
29 AutoCAD kunye ne-intanethi (1 | 2)
30 Isethi esicwangcisiweyo
31. Indawo ethi "3D Modeling".
32 Inkqubo yoqhagamshelwano kwi-3D (1 | 2)
33 Ukujonga izinto kwi-3D (1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b)
34 Izinto ezilula kwi-3D (1 | 2 | 3 | 4)
35 I-3D imeshishini
36 Izitayela ezibonakalayo
37 I-Solids (1a | 1b | 2 | 3 | 4a | 4b)
38 Ukunikezelwa (1 | 2 | 3 | 4)
40 I-AutoCAD 2009 interface (1 | 2)
41 Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2009 (1 | 2)
Apha ngezantsi ndikubonisa umzekelo weevidiyo, njengoko uza kubona, banenkcazo kungekuphela nje ngokusebenza kwenkqubo kodwa kunye neengcinga kunye nokuziqhelanisa namagcisa aqhelekileyo. Eli licandelo lokushicilela, esinye sezihloko ezinzima kwiikhosi ze-AutoCAD.
Ke ukuba injongo yakho kukufunda i-AutoCAD, yasimahla kunye nevidiyo, le isenokuba yeyona ndlela ilungileyo. Kufanelekile ukuba uqaphele, kuba le khosi inye sele ikho Yakhelwe i-AutoCAD 2012.
Yiya kwiklasi ye-AutoCAD.
José F. Santos V. uthi:
Ndinomdla kwikhosi ye-autocad ye-free 2013
I-CUTSE AUTOCAD 2012 KWI-VIDEOS I-2000 FUNDA UKUTHI
Sawubona Manuel, siyabonga ngesiqhagamshelo esitsha, siya kuqaphela umsebenzi wakho.
Ukubulisa, kwaye ndivuyisana.
Luis Manuel González Nava uthi:
Ndiyabulela kakhulu kule post kunye nangamazwana. Ndiyathetha ukuba ndihlaziya ikhosi ukuya kwinguqu ye-2012 yale nkqubo. Inkqubela phambili yophuhliso lwayo ingabonwa http://www.guiasinmediatas.com kwaye ndiyathemba ukuba xa kuphelile kuya kufumaneka kwi-aulaclic.
Fumana ukubingelela ngokukhawuleza.